Falanqaynta AirTag: teknolojiyaddu waxay ku urursan tahay ugu badnaan | Wararka IPhone
Falanqaynta AirTag: tikniyoolajiyadda waxay ku urursan tahay ugu badnaan
Luis Padilla | 03/05/2021 10:00 | Qalabka IPhone, dhowr
Apple waxay hada soosaartay badeecad cusub: AirTag, oo ah aalad lagaa caawiyo inaad ogaato halka ay alaabtaadu joogto markasta, iyo in qiima ahaan iyo faa iidooyin loo ballanqaadayo inay noqdaan bambo gacmeed. Waan tijaabinaynaa oo waxaan ku tusaynaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ka ogaato.
2 Xuduudaha kala duwan
3 Raadinta arjiga
4 Maaha nidaam kahortaga xatooyada, ama helista xayawaanka
5 Asturnaanta ayaa ugu horreysa
Qiyaas ahaan wax ka yar 3 sentimitir oo dhexroor ah, dhumucdiisuna tahay 8 milimitir oo miisaankeedu yahay 11 garaam, qalabkan yar ayaa wax yar ka weyn lacagta birta ah, taas oo sahlaysa in meel walba lagu habboonaado. Markaad meel tidhaahdana waad u jeeddaa, maxaa yeelay Waad ku mahadsan tahay qeexitaanka IP67, waxay u adkeysaneysaa boodhka iyo biyaha, xitaa iska caabinta quusin ee hoos u dhaadhaca hal mitir ugu badnaan 30 daqiiqo.. Waxaa laga heli karaa oo keliya cad, nooc ka mid ah Apple, haa waan u habeyn karnaa adigoo weydiisanaya inaan duubno iyada oo aan wax kharash ah ku bixin. Sawir gacmeedkan waxaan ku isticmaali karnaa illaa afar xarfood, ama xitaa emojis.
Waxay leedahay xiriir Bluetooth LE si loogu xiro iPhone-kaaga, U1 chip ee saxitaanka raadinta, iyo NFC si taleefannada casriga ah, xitaa Android, ay u akhrin karaan macluumaadka ay ku jiraan haddii ay dhacdo in la waayo. Waxay ka kooban tahay ku hadla gudaha, batteriga unugga badhanka isticmaale-badalka CR2032, iyo xawaare-hawraha. Way adagtahay in tiknoolajiyad dheeri ah la isugu geeyo aaladdaas yar, laakiin Apple waxay sidoo kale ku guuleysatay inay ka gudubto xaddidaad aad u daran oo noocyada agabyadaasi ay lahaayeen: iyadoo aan loo eegin sida aad uga fog tahay, waad awoodi doontaa inaad ogaato halka ay ku taal. Mar dambe ayaan kuu sharixi doonaa.
Unugga badhanka ayaa ahaa fikrad muran badan dhalisay, qaar badan ayaa soo jeediyay in batteriga dib loo soo celin karo uu ka fiicnaan lahaa. Shakhsiyan iyo kadib markaan arko waxa ku dhaca baytariyada aaladahaas yar (sida AirPods), waxaan u maleynayaa inay fiican tahay batariyaal aad ku dhex tuuri karto weelka ku habboon isla markaana aad adigu iska beddeli karto, qalab cusub soo saar. Nolosha batariga badhan ayaa ah hal sano sida ay sheegtay Apple, laakiin way kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran hadba sida aad u isticmaasho. Haddii aad inta badan lumiso AirTag-kaaga oo aad isticmaasho goobta saxda ama ku hadla, muddadu way ka gaabin doontaa.
AirTags waxay isticmaalaan isku xirnaanta tamarta hoose ee Bluetooth (LE) si ay ugu xirmaan iPhone-kaaga inta ay cunayaan baytari yar, wax muhiim u ah markaan ka hadlayno qalab aad u yar oo madaxbanaanidiisu ay tahay inta ugu macquulsan Baaxadda isku xirnaanta Bluetooth-kan waa illaa 100 mitir, laakiin tani wax badan ayey ku xiran tahay waxa u dhexeeya AirTag iyo iPhone-kaaga. Waxay kaloo isticmaashaa jabinta U1 (Ultra Wide Band) si aad si sax ah u ogaato meesha ay ku taal AirTag, iyada oo sida saxda ah ay xitaa tilmaamayso fallaadh halka ay tahay, in kastoo taasi ay dhacdo oo keliya marka uu jiro masaafo gaaban oo u dhaxeysa iPhone-kaaga iyo AirTag-gaaga, iyo kaliya haddii aad haysato iPhone oo wata U1 chip (iPhone 11 iyo wixii ka dambeeya).
Xidhiidhka iPhone-ka ayaa si otomaatig ah loo sameeyaa isla marka aad ka saarto bacda daboolaya AirTag, taas oo keenaysa in la maqlo dhawaqa ugu horreeya ee raadraacahan Sida marka aad u habeynayso AirPod-kaaga, ama HomePod, daaqada hoose ee caadiga ah ayaa soo muuqaneysa dhowr tallaabo ka dib AirTag-kaaga ayaa ku xirnaan doona koontadaada Apple, diyaarna u ah in la isticmaalo. Xiriirintan koontadaadu waa mid aan dib looga noqon karin, ma jirto wax suurtagal ah oo dib loogu dejinayo AirTag-kaaga si loo tirtiro xogtaada. Kaliya milkiilaha ayaa ka sameyn kara codsiga Raadinta iPhone ama iPad. Tallaabo nabadgelyo oo lagama maarmaan u ah inay ka dhigto mid wax ku ool ah.
Apple waxay dhawaan shaacisay isdhexgalka trackers-ka saddexaad ee arjigiisa raadinta, taas oo wadada u xaaraysa AirTags-keeda, oo aan si cad uga xakameyn karno codsigan gudahiisa. Waan arki karnaa halka ay ku taal khariidada, waxaan ka dhigi karnaa cod si aan u helno haddii aan dhow nahay, xitaa waxaan isticmaali karnaa baaritaanka saxda ah haddii aan haysanno iPhone oo wata U1 chip. Haddii ay dhacdo in aan wayno shayga aan ku lifaaqnay AirTag, markaa waxaan u calaamadeyn doonnaa sidii lumay. Markii aan sidan sameyneyno, waxaa nala weydiin doonaa lambar taleefan iyo farriin la muujin doono qofkii hela, si ay kaaga caawiso inaad soo ceshato.
Mid ka mid ah astaamaha ugu xiisaha badan ee AirTag waa in xitaa haddii aad ka fog tahay, aad u fog, aad awoodi doontid inaad ku ogaato halka uu ku yaal khariiddada. Sidee tani noqon kartaa? Sababtoo ah AirTag waxay adeegsan doontaa wixii iPhone, iPad ama Mac ah si ay ugu dirto meesheeda si aad u ogaato meesha ay ku taal. Taasi waa, haddii aad furayaasha kaga tagto maqaaxi, oo aad shaqo tagto, markaad ogaato inaad halbawashay halkaas, xitaa haddii aad u jirto masaafo badan, waxaad ka raadin kartaa khariidada illaa inta uu jiro qof u dhow iPhone, iPad ama Mac.
Haddii qof uu helo qalabkaaga lumay, waxaad heli doontaa ogeysiin ah in laga helay goobta saxda ah, qofkaas sidoo kale wuxuu awood u yeelan doonaa inuu arko fariintaas aad ka tagtay oo qoran oo kula soo xiriiro. Xitaa haddii aad isticmaasho Android waxaad isticmaali kartaa NFC ee AirTag si aad u hesho macluumaadkaas. By the way, xaqiiqda muhiimka ah ayaa ah in AirTags aysan wadaagin xubnaha qoyska, dalabkaaga Raadinta waxaad kaliya arkeysaa AirTag-kaaga, ma ahan kuwa qoyskaaga intiisa kale, qofka kaliya ee hela ogeysiisyada waa milkiilaha AirTag , cid kale ma jirto.
Maaha nidaam kahortaga xatooyada, ama helista xayawaanka
Tan iyo markii Apple ku dhawaaqday AirTags, dhammaan adeegsiga suurtagalka ah ee dadku u maleeyeen inay siin karto qalabkan yar ee Apple wuxuu bilaabay inuu ka muuqdo shabaqa. Waxaa jira hal xaqiiqo oo keliya: waa aalad tilmaamaysa, intaas uun. Maaha nidaam ladagaalanka tuugada, maahan raad raaca xayawaanka, dad aad uga yar. Dabcan qof kastaa wuu u isticmaali karaa sida uu doono, sida waxkastoo kale, laakiin haddii aad isticmaasho digsi aad u sameyso pizza, waxa caadiga ah ayaa ah in natiijada aysan aheyn tan ugu fiican, in kastoo la sameyn karo. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda AirTags: haddii aad qorsheyneyso inaad u isticmaasho sidii nidaam ka soo horjeedka xatooyada ama raadraaca xayawaanka, waxaad helaysaa cillado aad u yar, maxaa yeelay taasi ujeeddadooda maahan.
Waa sidaas AirTag wuxuu rabaa qofkii hela inuu ogaado inuu jiro, waa sababta ay u soo saarto codad, ogeysiisyona ugu dirto iPhone-ka, iwm. Haddii tuug xado boorsadaada oo uu helo ogeysiis ama uu ka maqlo dhawaaqa AirTag, isla markiiba wey iska tuurayaan ama batteriga ayey ka saarayaan. Sababta oo ah waxaa loogu talagalay in qofkii helaa boorsadaada uu garanayo cidda uu la xiriirayo si uu ugu soo celiyo, maahan inuu kashifo tuug suurtagal ah oo xaday. Sidoo kale maahan raadraac wanaagsan oo loogu talagalay xayawaanka, dadka aad uga yar.
Asturnaanta ayaa ugu horreysa
Apple muddo dheer ayey diiradda saartay asturnaanta isticmaaleyaasheeda, AirTagsna waa laga reebi karaa. Kaliya ma ahan inay xafido dhammaan xogta aad dirto mid gaar ah, xitaa markaad isticmaaleysid IPhone-ka shisheeyaha si aad ugu dirto meesha ay ku yaalliin koontadaada iCloud, laakiin Apple waxay hirgelisay tallaabooyin nabadgelyo oo looga hortagayo in qof kula raaco adiga oo adeegsanaya AirTag aad meel dhigtay iyada oo aan laga warqabin. Marka marka AirTag-gaaga aan adigu kaa dhaqaaqin in muddo ah, moobilkaaga waxaa lagu wargalin doonaa ogeysiis. Haddii aad timaaddo gurigaaga ama meel kale oo aad ku soo gasho aaladda AirTag ee aanad lahayn, sidoo kale waa lagu soo ogeysiin doonaa. Ogeysiisyadan amniga waa la naafoobi karaa, laakiin waa inuu naafo u ahaadaa qofka helaya ogeysiiska amniga, ee uusan aheyn milkiilaha AirTag.
Apple AirTags cusub ayaa mar kale wadada u furay tartamada oo dhan. Waxaan isticmaaleynay qalabka xaraashka muddo dheer, laakiin midkoodna ma lahan dhammaan astaamaha aan ka tilmaannay AirTags. Naqshadeynta, ismaamulka, iska caabbinta, is dhexgalka nidaamka iyo qiimaha, maheli doontid meel ka wanaagsan haddii aad isticmaashid iPhone. Haa, wali waxay haysaa cayayaanka qaar oo ay waajib tahay in la safeeyo, sida midka aan kaaga digeynin markii aad ka guurto, laakiin Apple muddo dheer ayey ku sifeyneysay howlgalka AirTag-yadaas waana ay muujineysaa. Iyo haysashada malaayiin qalab adduunka oo dhan ah si ay kaaga caawiso helitaanka AirTag waa wax aysan cidna qaban karin Apple mooyee. € 35 p bahalladani waxay joogi doonaan meel kasta bilo yar gudahood, waxaan arki doonnaa iyaga in kabadan AirPods.
Ku dhejiyay: May 3 ee 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: May 3 ee 2021
Naqshad isku dhafan oo caqli badan
Tiknoolajiyad casri ah oo leh U1 chip
U adeegsiga dhammaan aaladaha Apple goobta
Suurtagal ma ahan in la ogeysiiyo markii aad ka tagto
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Falanqaynta AirTag: tikniyoolajiyadda waxay ku urursan tahay ugu badnaan
Apple waxay xareyn kartaa 20 milyan oo unug oo ah iPhone-kii ugu horreeyay ee la laaban karo sannadka 2023
New iMac, iPad Pro, iyo New Apple TV Daahfurka May 21